Mamorona Tailwind: Mamorona, fandaharam-potoana, ary mamoaka Pin tsara tarehy amin'ny Pinterest | Martech Zone
Mamorona Tailwind manao Pinterest Pins manana kalitaon'ny mpamorona haingana ary mamela anao hanatsara sy hanatsara ny varotra Pinterest rehetra ho tsara kokoa noho ny teo aloha. Amin'ny tsindry iray dia azonao atao ny manova ny sarinao ho hevitra famolavolana Pin am-polony manokana. Ny fitaovana rehetra ao amin'ny iray dia ahafahanao mamorona, mandamina ary mamoaka Pinterest.
Ahoana ny famolavolana amin'ny Tailwind Create
Ity misy horonan-tsary iray natambatry ny ekipa momba ny fampiasana ny Tailwind Create.
Mamorona Tailwind mamela ny mpivarotra Pinterest hanatsara ny fizotran'ny Pinterest ho an'ny famoronana, famoahana ary famakafakana haingana indrindra misy.
Inona no fiantraikan'ny famolavolana Pin nohatsaraina ao amin'ny Pinterest?
Mamonjy Pinterest bebe kokoa - Nohatsaraina ny famolavolana Pin Mitahiry avo 6.9 heny amin'ny ankapobeny ho an'ny mpampiasa Tailwind! Kaonty misy mpanaraka latsaky ny 100 no nahita fitomboana 10x, mpanaraka hatramin'ny 10,000 no mahita tahiry 2.8x bebe kokoa, ary mpanaraka mihoatra ny 10,000 no mahita fitomboana 3.1x eo ho eo!
Mpanaraka Pinterest bebe kokoa - Nohatsaraina ny famolavolana Pin 3.7 heny ny mpanaraka bebe kokoa amin'ny ankapobeny ho an'ny mpampiasa Tailwind! Kaonty misy mpanaraka latsaky ny 100 no nahita fitomboana 6x, mpanaraka hatramin'ny 10,000 no mahita mpanaraka 1.9x bebe kokoa, ary mpanaraka mihoatra ny 10,000 no mahita fitomboana 1.8x eo ho eo!
Pins Pinterest misimisy kokoa navoaka - Nohatsaraina ny famolavolana Pin 4.2 heny kokoa ny pin navoaka amin'ny ankapobeny ho an'ny mpampiasa Tailwind! Ny kaonty misy mpanaraka latsaky ny 100 dia nahita fitomboana 6x, mpanaraka hatramin'ny 10,000 no mahita pin 2.9x bebe kokoa navoaka, ary mpanaraka 10,000 mahery no mahita fitomboana 1.9x eo ho eo!
Mazava ho azy fa mety tsy hitovy ny vokatrao fa ny Tailwind no mamoaka ny Vokatra mahazatra amin'ny mpikambana Tailwind isan-taona, mba hahitanao ny fomba ampitahainao amin'ny vondrom-piarahamonina Tailwind. Ary, tafiditra ao amin'ny kaontinao Tailwind ny tatitra tsotra izay manome:
Top Pins Report – Jereo hoe iza amin'ireo Pins no mitondra fifamoivoizana mankany amin'ny atiny ary mitadiava loharanon-tsindrimandry efa vonona rehefa hitanao hoe iza amin'ireo Pins no mitondra fifamoivoizana mankany amin'ny atiny hafa!
Pin Inspector – Tadiavo avy hatrany ny Pins voatsindry sy voatahiry indrindra mba hahafantaranao foana izay tokony hohatsaraina (na dia tsy olona “isa” aza ianao).
Ny salan'isa mpikambana ao amin'ny Tailwind dia mahazo repin 6.9x bebe kokoa ary mpanaraka 3.7x bebe kokoa amin'ny Pinterest. Manomboka ny anao Mamorona Tailwind fitsarana miaraka amin'ny Pin 100 voalahatra anio!
Misoratra anarana amin'ny Tailwind
Tags: mamorona pins pinterestsaryPinterestanalytics mahombysary pinterestMarketing amin'ny Pinterestpins pinterestmamoaka pins pinterestfandaharam-potoana Pinterest pinshaino aman-jery sosialysary an-tseraseratailwindmamorona tailwind
ApexChat: Valio ny Webchat-nao 24/7 miaraka amin'ireo Agent Chat mahay